कसरी आईओएस ११ बाट आईओएस १०..9..8.4.1 मा डाउनग्रेड गर्ने आईफोन समाचार
ओडिसीसोटा २.० को साथ आईओएस from बाट आईओएस .9..8.4.1.१ मा कसरी डाउनग्रेड गर्ने
हामीले भर्खरै जेलब्रेक समुदायको लागि केहि महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पायौं। धेरै जसोलाई थाहा छ, एप्पलले आईओएस .8.4.1..9.१ लाई यसको प्रमाणीकरण सर्भरमा केही समयको लागि हस्ताक्षर गर्न रोकेको थियो, त्यसैले आईओएस from बाट आईओएस .8.4.1..9.१ मा डाउनग्रेड गर्न असम्भव थियो। तसर्थ, यदि तपाईं आईओएस on मा हुनुभएको थियो र तपाईंको फोनले प्रदर्शन गरेकै जस्तो गरिरहेको छैन, वा तपाईं आईओएसको नयाँ संस्करणसँग कुनै पनि कारणको लागि खुसी हुनुहुन्न, तपाईंसँग पकड बाहेक अरू विकल्प थिएन। जे होस्, यो समस्या यसको अन्तिम संस्करण २.२ मा ओडिसूसोटालाई धन्यवाद अन्तमा आएको छ, अब हामी आईओएस / /9.०.२ बाट आईओएस of को पछिल्लो संस्करणमा जान सक्छौं, iOS संस्करण version..8.4.1.१।
यसको अघिल्लो संस्करणमा OdysseusOTA ले हामीलाई आईओएस or वा आईओएस from बाट अहिले सम्मको उत्तम आईओएस अपरेटि system प्रणालीमा फर्काउन अनुमति दियो, संस्करण .8.१..7, बिना SHSH भण्डारण हुन। समय परिवर्तन भएको छ, र हामी धेरै खुसी छौं कि यो नयाँ संस्करण आईओएस and र आईओएस between बीच उपयुक्त छ, त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले कुनै पनि कारणले गर्दा रिप्रेसन गर्न लागेका छन्, स्वतन्त्रता जेलब्रेकको कारण हो, र यसैले नै यो उठेको छ अपरेटिंग प्रणालीमा फिर्ता जाने सम्भावना।
दुर्भाग्यवस यो सबै उपकरणहरु को लागी सम्भव छैन। ओडिसीसोटाका साथ उपयुक्त आईफोनहरू आईफोन,, आईफोन c सी, आईफोन s एस र आईफोन,, साथै आईप्याड २ र आईप्याड are हुन्। हामीसँग माफी चाहन्छौं यदि तपाईंसँग यी भन्दा बढि उपकरण छ भने र तपाईं डाउनग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ, तर यो सम्भव छैन। यद्यपि यो वास्तवमै बुझ्न योग्य छैन कि पछि आईफोन s एस उपकरणको साथमा आईओएस with। सँग राम्रो प्रदर्शन छैन। म पनि सम्झन अवसर लिन्छु कि आईओएस .5 .१ ले धेरै प्रतिज्ञा गर्छ, कम्तिमा यसको हालको बिटासमा यो साँच्चिकै स्थिर छ र शक्तिशाली प्रणाली।
पक्कै पनि हामीसंग भएको भिडियो प्रशस्त छ, हामी वास्तवमै केवल ती आदेशहरू प्रतिलिपि गर्नुपर्दछ जुन हामीले "Readme" फाईलमा चरण-दर चरणमा फेला पार्दछौं, ती विभाजित छन् र फाइलमा सूचीबद्ध छन्। साथै, यो लिनक्स र म्याक ओएससँग उपयुक्त छ। यो नबिर्सनुहोस् कि हामीले आईओएस संस्करण डाउनलोड गर्न आवश्यक छ जुन हामी स्थापना गर्छौं, आईओएस .8.4.1..XNUMX.१ मा .psw मा, यसको लागि हामी वेबसाइटमा जान्छौं। GetiOS र हामी आईओएस .8.4.1..XNUMX.१ र हाम्रो उपकरण चयन गर्नेछौं। अन्तिममा यो लिंक तपाईंसँग उपकरण उपलब्ध छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » ओडिसीसोटा २.० को साथ आईओएस from बाट आईओएस .9..8.4.1.१ मा कसरी डाउनग्रेड गर्ने
मसँग ठूलो प्रश्न छ: मसँग आईप्याड with छ आईओएस .3..8.4 (जुन गम्भीर गलत छ) को साथ। म यो उपकरणलाई आईओएस .8.4..7 बाट एसओएसएच बिना आईओएस to, वा आईओएस dow मा डाउनग्रेड गर्न सक्दछु?
यसले मलाई धेरै राहत दिनेछ
জাवीले तपाईको टिप्पणीको बारेमा केही जवाफ दिएका छन् ... मसँग 9.0.2 .०.२ मा आईप्याड छ र म यसलाई .8.4. to बाट घटाउँदैछु र मँ यो जान्न चाहान्छु कि म यसलाई पछि आईओएस download मा डाउनलोड गर्न सक्दछु…।
र आईओएस from बाट यसलाई आईओएस to मा पठाउन सकिन्छ?
पेपिटोफिललाई जवाफ दिनुहोस्
यो म जान्न चाहन्छु, यदि यो सम्भव छ भने आईओएस to बाट आईओएस to, वा आईओएस to मा जानका लागि।
के यो केवल म्याक र लिनक्सको लागि हो? विन्डोजको लागि कुनै संस्करण छैन?
योर्डनी क्यास्टिलो भन्यो
मित्रहरू तपाईले अधिक संस्करणसँग मात्रै गर्न सक्नुहुन्न जुन इंगित गर्दछ कि आईओएस to मा डाउनलोड गर्न प्रोब देखि यो काम गर्दैन र अहिले यो केवल म्याक र लिनक्सको लागि काम गर्दछ जुन उनीहरू विन्डोजको लागि एउटामा काम गरिरहेका छन्।
योर्डनी क्यास्टिलोलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन 9.1 .१ छ, यो आईओएस .5. iOS.१ मा डाउनग्रेड गर्न सकिन्छ?
डेरोनलाई जवाफ दिनुहोस्
एस्टेबन आईफोन भन्यो
तपाई साथी बनाउन सक्नुहुन्न, तपाई केवल 9.0.2 .०.२ संस्करण मात्र गर्न सक्नुहुन्छ।
Esteban आईफोनलाई जवाफ दिनुहोस्
ऑस्कर आईफोन c सी भन्यो
नमस्कार, के यो 9.0 .० मा आईफोन कम गर्न सम्भव छ? यो नयाँ प्रणालीको साथ? मैले देखेको कुराबाट म्याक योसेमाइटमा हुनुपर्दछ! धन्यबाद
Oscar iPhone 5c लाई जवाफ दिनुहोस्
म लिनक्स र डाउनग्रेड कसरी स्थापना गर्न सक्छु? 🙁 वा कहिले यो विन्डोजको लागी जारी हुन्छ?
Esteban आईफोन भन्यो
उपकरण भर्खरै सबै आईफोन models मोडेलहरूलाई समर्थन गर्न अद्यावधिक गरिएको छ, तिनीहरू s हरू र आईप्याड २ र support समर्थन गर्न काम गरिरहेका छन्।
एस्टेबान, मसँग आईप्याड have छ र यस समयमा म मात्र गर्न सक्दछु IOS बाट3.०.२ देखि .9.0.2..8.4.1.१ मा डाउनलोड गर्न?
के तपाईंलाई थाहा छ यदि मँ पछि यसलाई समान उपकरणको साथ आईओएस download मा डाउनलोड गर्न सक्छु?
वा यदि त्यहाँ पृष्ठ छ जहाँ उपकरणको अपडेटहरू अनुसरण गर्ने ...?
एप्पल टिभी ले आजबाट तीन नयाँ च्यानलहरू प्राप्त गर्दछ
गितार हीरो प्रत्यक्ष अनुप्रयोग स्टोर पुग्छ, तर अझै स्पेनमा छैन